Ikabini eqhelekileyo @ Ihotele iCarissima
Ihotele yohlahlo lwabiwo-mali oludumileyo eMuara Enim Ihotele iCarissima ihleli ikwindawo entle ngenxa yezizathu ezininzi. Le hotele yebhajethi e-Muara Enim, ibekwe kumgama omalunga ne-1 km ukusuka eKantor Gubernur. Ifumaneka kuphela kwi-0.75 km ukusuka ePalembang Square. Umdibaniso ogqibeleleyo wentuthuzelo noxolo, le propathi yanamhlanje yonganyelwe ngaphakathi okusemgangathweni kunye neemfuno zangoku zokuhlala okumnandi. Le hotele inezixhobo ezisisiseko ezifana ne-AC, iTV, iWifi ukuze kube lula kunye nokuhambela iindwendwe.
Indawo yokudlela yaseJalan Veteran, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan
Indawo yokutyela Pecel Lele Pak Jo
Indawo yokutyela RM SAFA MARWAH
Indawo yokutyela yePizza Rakyat Simpang Lima
Indawo yokutyela Nusantara Resto Galaxy Hotel
Indawo yokutyela eKFC Simpang Bandara Palembang
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kecamatan Ilir Timur I